लेडिज फ्यान धेरै हुँदा अनमोल सेल नम्बर परीवर्तन गर्न बाध्य,बाबु छोराकै पनि भेट हुन गाह्रो « News24 : Premium News Channel
४ फाल्गुन २०७२, मंगलवार
लेडिज फ्यान धेरै हुँदा अनमोल सेल नम्बर परीवर्तन गर्न बाध्य,बाबु छोराकै पनि भेट हुन गाह्रो
काठमाडौंमा आयोजना गरीएको ड्रिम्स फिल्मको अडियो सार्वजनिक कार्यक्रममा अनमोल केसिले बारम्बार मोबाईल नम्बर परिवर्तन गर्नु पर्ने समस्या भएको बताए । अनमोलले २-२ महीनामा मोबाईल नम्बर परीवर्तन गर्ने गरेका बताएका छन् । पछिल्लो समयमा चर्चामा आईरहेका नायक अनमोलको फ्यानहरु बढे सँगै उक्त समस्याहरु पनि बढेको हो । उनले भनेका छन् ‘के गर्नु केटिको फोन यक्ति आउँछकी, नम्बर परिवर्तन नगरी सुखै छैन ।’
हिले देखिनै फिल्म क्षेत्रमा लागे पश्चात अनमोल व्यस्त नायकको रुपमा चिनिएका हुन् । तर अहिले फिल्म ड्रिम्स पछि अझ बढि व्यस्तता अनमोलमा बढेको देखिन्छ । त्यस्तै अनमोल र उनका बाबु भुवान केसि एउटै घरमा बसेपनि उनिहरु काम पर्दा मात्र भेट हुने पनि खुलाएका छन् । एउटै घरमा बसे पनि उनिहरु आ-आफ्नै ल्फ्याटमा बस्ने बताउँछन् ।
फिल्म ‘ड्रिम्स’ को रीलीज डेट नजिकीदै गर्दा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै फिल्म‘ड्रिम्स’को अडियो सार्वजनिक गरीएको छ । फाल्गुनको २१ बाट दर्शक माझ आउने फिल्म ‘ड्रिम्स’को निर्माण पक्षले अडियो सार्वजनिक गरेका हुन् ।
ड्रिम्स’ फिल्मको अफिसियल प्रोमोले पनि अहिले निकै दर्शक क्रेज बढाईरहेको छ । फिल्म ‘ड्रिम्स’लाई भुवान केसिले निर्माण तथा निर्देशन गरेका हुन् । जस्मा पटकथा तथा संवाद सामिप्य तिमल्सिनाको रहेको छ । त्यस्तै फिल्म ‘ड्रिम्स’मा अनमोल केसि,साम्राज्ञि राज्य लक्ष्मि शाह,सन्ध्या केसि लगाएतले अभिनय गरेका छन् । ‘ड्रिम्स’ फिल्मको अडियो सार्वजनिक कार्यक्रममा कलाकार साम्राज्ञि राज्य लक्ष्मि शाह,पटकथा तथा संवाद लेखक साम्प्यि तिमल्सिनाका साथै फिल्मका नायक अनमोल केसि र निर्माता तथा निर्देशक भुवान केसिले उपस्थिति जनाएका थिए ।
यश र सञ्जय दत्त स्टारर् ‘केजीएफ २’ले विश्वभर कमायो ११६२ करोड, कुन साता कति कमायो ?
काठमाडौं । प्रशान्त नील निर्देशित यशको फिल्म ‘केजीएफ च्याप्टर २’ ले बक्स अफिसमा अझैं पनि
साउथका सुपरस्टार महेश बाबु भन्छन्, ‘हिन्दी फिल्ममा काम गरेर समय खेर फाल्न चाहान्न’
काठमाडौं । साउथका सुपरस्टार महेश बाबुले हिन्दी फिल्ममा काम गरेर आफ्नो समय खेर नफाल्ने बताएका
सारेगम लिटिल च्याम्पियनबाट चर्चा कमाएकी रोशाले ल्याइन् ‘मलाई बिर्स नभनिदेउ’
काठमाडौं । झापाको मेचीनगर–८ की रोशा फुयाल नेपालको रियालिटी सो सारेगम लिटिल च्याम्पियनमा सहभागी भएसँगै
‘केजीएफ २’को हिन्दी भर्सनले मात्रै कमायो ४०१ करोड बढी !
काठमाडौं । पछिल्लो समय साउथका सुपरस्टार यशको फिल्म ‘केजीएफ च्याप्टर २’ निकै चर्चामा छ ।